News 18 Nepal || कोरोना महामारी भयावह बन्दै : यस्ता छन् निषेधाज्ञाको अनुमान र समाधान
काठमाडौं । कोरोना महामारी भयावह बन्दै गरेका बेला लापरबाही भइरहेको देखेपछि जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । काठमाडौंमा देखिएका २ दृश्यले उनलाई चिन्तित बनाएको हो ।
डा. पाण्डे लेख्छन् : आजका २ दृश्य, निषेधाज्ञाको अनुमान र समाधान
१. बालाजु बाइसधारा मेला तथा स्वयम्भूमा हजारौं मान्छेको भीडभाड । नाकमुनि, चिउँड़ोमा मास्क झुन्ड्याउनेको संख्या अधिक। मास्क लगाउने र नलगाउनेको संख्या बराबर । भौतिक दूरी कुन चरीको नाम हो, त्यहाँ थाहा थिएन ।
२‍. पर्सिदेखि हुने निषेधाज्ञाका कारण उपत्यका छाड्नेको बस काउन्टर, बसपार्क, बस स्टप आदिमा हजारौंको धकेलाधकेल । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नागरिकले किन पालना गरेका छैनन् ? गृह प्रशासनले किन पालना गराएको छैन ?
हामी नागरिक उनै हौं । गृह प्रशासन उही हो । निषेधाज्ञामा पनि गल्ली, भित्री बस्ती, चिया पसल, भट्टी, तरकारी बजार…मा उस्तै भीडभाड हुने देखिन्छ । मिडियाले रित्ता सडक र बन्द भएका मुख्य बजार देखाउनेछन् । अनि सरकारले निषेधाज्ञा पूर्ण लागू भएको भनेर मक्ख पर्नेछ । संक्रमितको संख्या बढ्नेछ । निषेधाज्ञा बढ्दै जानेछ ।
सरकारले मास्क र भौतिक दूरी कायम गराउन भएभरको शक्ति लगाउने तथा आम नागरिकले मापदण्ड पालना गर्ने हो भने संक्रमणको चेन तोडिन्छ । ३ हप्तामा अहिलेसम्मको सेटल हुन्छ । यसका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।
यस पटकको महामारी हामीले कल्पना गरेको भन्दा धेरै संक्रामक र घातक छ । अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनको अभाव छ । रोकथामका लागि कडा कदम नचाल्ने हो भने उपचार नपाएर ठूलो क्षति हुन सक्छ । सरकार र आम नागरिक समयमै सचेत बनौं । दुवै पक्ष सचेत बन्यौं भने लकडाउन छोटो हुन्छ । क्षति हुँदैन ।